Raashin - Gpedia, Your Encyclopedia
Cunto, Raashin (Af carabi: طعام; Af Ingiriis : food) waa shay kasta oo la quuto si looga helo nafaqo iyo awood jidhka nooluhu u baahan yahay si uu u sii noolado. Cuntadu waa walax nooluhu quutaan taasi oo unugyada jidhka siisa tamar ay ku shaqeeyaan. Sida caadi ah cuntada waxaa laga helaa dhirta ama xayawaanka (ama labadoodaba); waxayna ka kooban tahay nafaqo, sida duxda (baruur), borotiin, fiitamiin, macdano iyo noocyo kale oo nafaqo ah kuwaasi oo taageera isla markaana tamar uu ku socdo siiya xubnaha jidhka. Walxaha cuntada waxa inta ugu badan laga qaataa afka waxayna tegtaa caloosha halkaasi oo unugyada jidhku u sii kala jebiyaan walxo yaryar, isla markaana loo isticmaalo awood ahaan, si noloshu u sii jirto.
Quraac, Qureec (Af Ingiriis : breakfast; Af carabi: إفطار) waa cuntada ugu horeeysa ee dadku cunaan aroortii marka laga soo tooso hurdada. Sida caadiga ah, quraacdu waa raashinka aroorti dadku cunaan. In kastoo dadku ku kala duwan yihiin wakhtiyada iyo nooca cunto ay ku quraacdaan. Guud ahaan dadku waxay quraacdaan qorax soo baxa aroortii ilaa laga gaadho qiyaastii 10ka subaxnimo, mararka qaar la gaadhsiiyo ilaa 11ka subaxnimo. Habeenkii marka dadku seexdaan waxay qaataan saacado badan oo bilaa cunto ah, markaas quraacu waa cuntada koowaad ee dadku ku bilaabaan markay soo toosaan taasi oo ku xidhan wakhtiga qof kasta ka tooso hurdada. Hadaba waxaa jira dadka qaar aan waxba cunin saacado badan xataa aya oon waxba ku mashquul ahayn.
Qado (Af Ingiriis : lunch; Af carabi: غداء) waa cuntada la cuno badhtamaha maalinta taasi oo ka kooban noocyo badan oo raashin ah. Marka la tixraaco dhaqanka dadka Soomaalida, qadadu waa cuntada ugu muhiimsan sadexda wakhti ee dadku wax cuno. Wakhtigani waxaa inta badan dadku cunaan cuntada ugu culus, badan ee ugu fiican ee la heli karo. Cuntada qadada Soomaalida waxaa ka mid ah: hilib, kaluun, bariis, baasto, khudaar, midho, maraq iyo noocyo kale. Si taasi ka duwan taasi meelo badan oo caalamka ah qadadu muhiim uma aha sida cashada wakhtigaasi oo la cuno raashinka ugu fiican ee la heli karo.
Casho (Af Ingiriis : dinner; Af carabi: عشاء) waa cuntada sadexaad ee dadku cunaan habeenkii ka hor intaanay seexan. Sida caadiga ah cashadu waa cuntada ka dambeysa qadada taasi oo dadku cunaan wakhtiga ka dambeeya qorax dhaca ilaa habeen badhka. Wadanada qaar waxaa caan ah in dadku casheeyaan 5ta galabnimo, ka hor intaanay qoraxdu dhicin, taasi oo dhakhaatiirta iyo cunto yaqaanadu ku sharaxeen ineey tahay mid u fiican caafimaadka. Wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan dadka Soomaalidu waxay inta ugu badan casheeyaan salaada cishaa'i wixii ka dambeeya. Sidoo kale, cuntooyinka ugu caansan ee dadka Soomaaliyeed ku casheeyaan waxaa ka mid ah: canjeerada, rootida, sabaayada, malawax, baastda, fadiirada, garowga, digirta, cambuulada, qamadiga, misirka, khudaar, midhaha iyo noocyo badan oo halkan lagu soo koobi karin.